Khayre oo kulan is xog wareysi ah la yeeshay wafdiga Eritrea – Radio Baidoa
Khayre oo kulan is xog wareysi ah la yeeshay wafdiga Eritrea
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Xeebta Liido waxa uu kulan gaar ah kula yeeshay wafdiga ka socday dowladda Eritrea oo Isniintii gaaray magaalada Muqdisho.
Khayre iyo wafdiga ka socday Eritrea oo uu hoggaaminayay Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea ayaa halkaasi waxa ay ku yeesheen kulan is xog wareysi ah oo ahmiyadiisu ay aheyd in la xoojiyo xiriirka labada dal si ay isaga kaashadaan horumarka dhaqaale iyo midka nabadgelyo ee Geeska Afrika.
Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax ayaa la dhacay quruxda iyo bilicda Xeebta Liido, wuxuuna dowladda Soomaaliya ku bogaadiyay sida ay uga wada shaqeeyeen amniga iyo kalsoonida ka dhaxeysa.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa Xeebta Liido waqti kula qaatay shacabkii halkaasi ku sugnaa, wuxuuna ka xog wareysanayay xaalada ay ku jiraan iyo waxyaabaha ay doonayaan inay dowladdu ka shaqeyso.
Wafdigan ayaa booqashadii ay ku joogeen magaalada Muqdisho oo Laba maalmood aheyd u soo gaba gabowday, waxaana la filayaa inay dib ugu laabtaan magaalada Asmara ee dalka Eritrea.
Ciidanka xoogga oo sheegay inay dileen xubno ka tirsan Shabaab